Mask မလုံလောက်မှုကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဆေးရုံတွင်ပင် အခိုးခံရမှုများဖြစ်ပွားလာ!!! - JAPO Japanese News
ကြာ 13 Feb 2020, 12:42 ညနေ
မျိုးစိတ်သစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းခံရသူများလာတာနဲ့လိုက်ပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း နှိမ့်ကျလာပါတယ်။..
စာဖတ်သူတို့လည်း ဒီလိုလျင်မြန်စွာနဲ့ကူးစက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါ စိတ်အေးသက်သာစွာနဲ့နေနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ချက်ရှိပါသလား?
၂၀၂၀ ခုနှစ် ၁ လပိုင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဝူဟန်ဒေသကနေစပြီး မျိုးစိတ်သစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကို စာဖတ်သူတို့လည်း သိပြီးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း ကူးစက်ခံရသူတွေများလာပြီးတော့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုးနိုးကြားကြားရှိလာကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုနိုးကြားလာတဲ့လူတွေက ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှာစိုးတဲ့အတွက် Mask တို့ ပိုးသတ်တဲ့ Alcohol spray တို့ကို ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ထားလာတတ်ကြပါတယ်။
လူတိုင်းလိုလို ဆောင်ထားလာကြတဲ့အတွက် ဆေးဆိုင်တွေနဲ့ Supermarket တွေမှာ အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲရောင်းကုန်သွားပြီး ပစ္စည်းပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေမှာတောင် ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာပဲ ရှာဝယ်သည်ဖြစ်စေ Mask တို့ ပိုးသတ်တဲ့ Alcohol spray တို့ကိုရောင်းတဲ့နေရာ မရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်နေရာမှာရနိုင်မလဲ?
အဲ့ဒီလိုဝယ်ချင်တဲ့လူတွေကလည်း တစ်နေရာထဲမှာစုဝေးလာကြပြီးတော့ အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေအထိလုပ်လာကြပါတယ်.
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Medical treatment လုပ်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ Twitter မှာဒီလိုရေးပြီး တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
“ကျေးဇူးပြု၍ Mask ကိုမဖြစ်မနေ ဆေးရုံကရောင်းပေးရမယ်ဆိုပြီး ဆေးရုံကိုမလာကြပါနဲ့။ အတင်းအကြပ်တောင်းဆိုနေလည်း ရောင်းပေးဖို့အတွက်ဆေးရုံဘက်ကလည်း အဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်။ လက်ရှိဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ လူနာရှင်တွေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တောင် Mask တွေမလုံလောက်တော့ပါဘူး!!!”
ဒီပို့စ်ကိုတင်တဲ့သူဟာ Mask နဲ့ ပိုးသတ်ပေးတဲ့ Alcohol spray မလုံလောက်မှုအကြောင်းကို ဆေးရုံမှာလည်းမကြာခဏ ပြောဆိုနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့အပြုအမှုတွေအထိ ဖြစ်သွားပါတယ်။
သူနာပြုတွေနဲ့ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေဆီမှာ Mask တွေအတင်းလာဝယ်ကြတယ်။
ဆေးရုံရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ Mask တွေတောင်းကြတယ်။
ဆေးရုံမှာထားပေးထားတဲ့ ပိုးသတ်ပေးတဲ့ Alcohol spray ကိုအိမ်ပြန်ယူသွားကြတယ်။
ထားပေးထားတဲ့ Alcohol spray ကို မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်spray ဘူးအလွတ်ထဲ ပြောင်းထည့်ပြီးပြန်ယူသွားကြပါတယ်။
ပုံမှန်လူတွေအတွက်ကိုမပြောသေးပါဘူး။ ဆေးရုံတက်နေတဲ့ လူနာတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်တောင် Mask တွေမလုံလောက်တော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ပိုးသတ်ဆေး Alcohol spray တောင် အခုလိုအခြေအနေမှာ အိမ်ပြန်ယူသွားတာက ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်ပေးမှုပါပဲ။
အရမ်းကိုလျင်မြန်ပြီး ဆိုးရွားစွာကူးစက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအတွက်တောင် မစဥ်းစားပေးဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်နိုင်ရင် ပြီးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ယူသွားတတ်ကြတဲ့သူတွေအတွက် အဓိကပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းအတွက်ပဲ ကြည့်တတ်တဲ့လူတွေရှိလာတာကြောင့် Twitter လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာလည်း လူတော်တော်များများရဲ့ မကျေနပ်သံတွေကိုလည်း ကြားရပါတယ်။
အရမ်းဆိုးရွားလွန်းပါတယ်။ ဆေးကုသမှုပေးတဲ့နေရာဖြစ်လျှက်နဲ့ ဒါလေးတွေတောင် မရှိဘူးလား။
ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဆေးရုံမှာလည်း Alcohol ပိုးသတ်ဆေးဘူးကြီး အခိုးခံလိုက်ရတယ်။
အခိုးခံလိုက်ရပြန်ပြီးလား? လူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေလည်း ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ?
အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကလည်းရှိနေတာလား? မဖြစ်နိုင်ဘူး။ စိတ်ဆိုးဖို့နေနေသာသာ တော်တော်လေးကိုအံ့သြမိပါတယ်။
အကယ်၍ကူးစက်ရောဂါခံရတဲ့အခါ အသက်အန္တရာယ်အထိပါစိုးရိမ်ရမယ့် အသည်းအသန်ဖြစ်နေတဲ့ လူနာရှင်တွေလည်းအများကြီး ဆေးရုံမှာရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးလူနာတွေအတွက်လည်း ကူးစက်ရောဂါကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ ဆေးရုံမှာ Mask နဲ့ ပိုးသတ်တဲ့ Alcohol spray တို့ကလည်း မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်နေတာပါ။
Media တွေရဲ့ ပြောနေတာကိုလက်ခံပြီး၊ Mask ကိုရရှိဖို့ ဆေးရုံအထိလာအနှောင့်အယှက်ပေးတာတွေကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်သင့်ပါပြီ။
ဒါပေမဲ့သတိမထားမိတဲ့အရာက ရောဂါကူးစက်ခံနေရတဲ့လူနာတွေ အများကြီးရှိတဲ့ဆေးရုံမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကလည်း သန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေနိုင်တဲ့အတွက် မလိုအပ်ဘဲဆေးရုံကိုလာတာကလည်း မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ရောဂါကူးစက်သွားနိုင်ချေ အများကြီးကိုရှိနေပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့ ကူးစက်မှုကအရမ်းလျင်မြန်နေတဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကိုတောင်မေ့ပြီး၊ စိတ်တွေရှုပ်ထွေး၊ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမလဲမသိတဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း နားလည်ပေမဲ့၊ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ပျာယာမခက်သွားဘဲ စိတ်အေးအေးထားပြီး ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ခုခံအားကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးမှအလိုက်သင့်လေး ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့စေချင်ပါဘူး!!!
လက်ရှိအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုမရောက်လို့ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ ထပ်တူဝမ်းသာရသလိုပဲ ရာသီအကူးအပြောင်းမှာဖြစ်ပါစေ၊ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပါစေ မမြင်နိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကလည်း ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် အရင်ဦးဆုံး ကိုယ်ခံအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အာဟာရမျှတစွာစားခြင်း၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ လက်ကိုလည်း မကြာခဏဆေးပေးခြင်းတို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးလည်း ကျန်းမာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်!!!!
အသံလည်းမထွက် ဆူညံမှုလည်းမရှိတဲ့ ဘူတာရုံးခန်းကအလန်းနာရီ